ओशोको आत्मकथाः शृङ्खला २१: बुद्धत्व नजिकको मानिस | साहित्यपोस्ट
प्रकाशित २७ मंसिर २०७८ १८:०१
ओशोको आत्मकथाः मेरो स्वर्णिम बालापन
बुद्धत्व नजिकको मानिस
ठीक छ… म जो भद्र व्यक्तिका बारेमा कुुरा गरिरहेको थिएँ, उनको पूरा नाम पण्डित शम्भुुरत्न दुुबे थियो । उनी कवि थिए, बडो अनौठा थिए किनभने उनी आफ्ना कविता प्रकाशित गर्न चाहँदैन थिए । कुनै पनि कविमा त्यस्तो गुण ज्यादै दुुर्लभ हुन्छ । सयौँ कविहरूलाई मैले भेटेको छुु । उनीहरू आफ्ना कविता प्रकाशन गर्नका लागि यति उत्सुक हुन्छन् कि तिनका लागि काव्यरचना गौण हुन पुुग्छ । जस्तासुकै विषयमा महत्त्वांक्षी होऊन्, त्यस्ता मानिसलाई म राजनीतिज्ञ भन्छुु । र, शम्भुु दुुबे महत्त्वाकांक्षी व्यक्ति थिएनन् ।
उनी निर्वाचित उपसभापति पनि थिएनन् किनभने निर्वाचित हुनका लागि कम्तीमा चुुनावमा उभिनुपर्छ । उनी सभापतिले मनोनित गरिएका व्यक्ति थिए । त्यो सभापति आफैँमा गोबरगणेश थियो, मैले पहिल्यै भनिसकेँ । उसलाई केही आउँदैनथ्यो । त्यसैले उसलाई एक जना यस्तो बुद्धिमान व्यक्ति चाहिएको थियो, जसले उसका सबै काम गरिदियोस् । सभापति एकदमै गोबरगणेश थियो र ऊ त्यो पदमा निकै लामो समयदेखि थियो । ऊजस्तै अन्य गोबरगणेशहरूले उसैर्लाइ पटक पटक चयन गरेका थिए ।
भारतमा गोबरगणेश हुनुु ज्यादै ठूलो कुरा हो । यस्तै गोबरगणेश महात्मा बन्न पुुछन् । यो सभापति पनि अन्य बोगस महात्माहरूजस्तै थियो । कुनै पनि प्रतिभाशाली र सृजनशील व्यक्तिलाई त्यस्तो महात्मा बन्न मन पर्दैन । ऊ कसैलाई पूजा गर्न पनि जान्दैन । म त त्यो गोबरगणेशको नाम पनि उल्लेख गर्न चाहन्नँ । आफ्नो जीवनमा उसले केवल एउटै मात्र गतिलो काम गरेको थियो र उसले शम्भुबाबुलाई उपसभापति बनाएको थियो । शायद उसले के गरेँ भन्ने नै थाहा नपाएर त्यसो गरेको हुनुपर्छ । गोबरगणेश मानिसहरू सजग हुँदैनन् ।
जुन क्षण शम्भुबाबु र मैले एकअर्कालाई देख्यौँ, केही भयो । त्यसै क्षण हामी दुवैको हृदय एक भयो, विचित्र मिलन भयो । कार्ल गुस्ताभ जङले यसैलाई ‘सिंक्रोनिसिटी’ भनेका हुन् । म सानो जंगली बालक, अशिक्षित र अनुुशासनहीन, हामी दुवैमा कुनै साम्य थिएन । उनी अति शक्तिशाली र अत्यन्त सम्मानित व्यक्ति थिए । मानिसहरू उनीसँग डराउँथे । उनी अत्यन्त सम्मानित व्यक्ति थिए । मानिसहरू उनीसँग डराउँथे किनभने उनीप्रति आदर देखाएन भने यसका लागि कुनै न कुनै दिन अवश्य पनि पछुताउनु पर्छ । किनभने उनको स्मरणशक्ति निकै तेज थियो । म त एउटा बालक थिएँ । त्यसमाथि हामी दुुईका बीच केही पनि समानता थिएनन् । उनी सारा गाउँका उपसभापति थिए । वकिलहरूको एसोसिएसन र रोटरी क्लब आदिका पनि सभापति थिए । उनी कयौँ समितिका सभापति अथवा उपसभापति थिए । उनी प्रायः सबै ठाउँ या पदमा आसिन थिए । उनी अत्यन्त शिक्षित थिए । उनले कानुनको उच्चतम डिग्री प्राप्त गरेका थिए । तर उनी त्यो गाउँमा वकालत गर्दैनथे ।
बाहिर काम गर्दै हल्ला गर्ने राक्षसका बारेमा चिन्ता नगर । ती मेरा नै शिष्य हुन् । जब म यस्ता शैतानहरूलाई संन्यासको दीक्षा दिइरहेको छु भने अरु त के होला ? बिल्जबबका सबै शिष्यलाई मैले लिएर आएको छु । म भनूूँ ? बिल्जबबले दैनिक सयौँ शिष्य गुमाइरहेका छन् । गुर्जियफले शैतानलाई बिल्जबब भन्थे । तर ती बिल्जबबसँग यति धेरै समयसम्म संगत गरे कि उनीहरूले उसको प्रविधिलाई सिकिसके । म प्रविधिका विरुद्धमा छैन । मलाई त यो निकै मन पर्छ । त्यसैले बिल्जबबका शिष्यहरू बडो सहज तरिकाले मेरा शिष्य बन्छन् । जुन काम उनीहरू बिल्जबबका लागि गर्थे, त्यसलाई उनीहरू मकहाँ पनि गरिरहन्छन् ।
म यसका बारेमा चिन्तित छैन भने तिमीहरु पनि यसका बारेमा चिन्ता नगर । म जे भनिरहेको छु, त्यसका लागि उनीहरूको यो होहल्ला ज्यादै राम्रो पार्श्वस्वरका लागि काम गरिरहेको छ । एक किसिमले पिकासोको पृष्ठभूमि, अलिक डरलाग्दो । डरलाग्दो दुःस्वप्न पनि कहिलेकाहीँ सुन्दर हुनसक्छ र जब त्यो सकिन्छ, अफसोच हुनसक्छ । र, उनीहरू जे गरिरहेका छन्, त्यो सुन्दा भलै त्यो राम्रो नलाग्ला तर उनीहरूले मेरो काम गरिरहेका छन् । त्यसैले बिल्जबब रिसाउनु स्वाभाविक छ । उनीहरू उसको शिष्य हुन् र मेरा लागि उनीहरू उसको प्रविधि उपयोग गरिरहेका छन् ।
विज्ञान धेरथोर शैतानको नै रुप हो । तिमीहरूले मेडिकल तालिम पाएका छौ, त्यो पनि एक किसिमले बिल्जबबको प्रविधिको हिस्सा हो । ती विचरा मानिसहरूलाई माफ गरिदिनू। उनीहरू आफ्ना तर्फबाट पुरापुर कोसिस गरिरहेका छन् । जहाँसम्म मेरो प्रश्न छ, म बोल्न थालेँ भने कसैले पनि रोक्न र बाधा पुु-याउन सक्दैनन् ।
अँ म भन्दै थिएँ– यो पृष्ठभूमिलाई हेर र यो मौनलाई । यदि यसलाई कसैले बुुझ्न सक्यो भने बिल्जबबलाई नोकरजस्तै प्रयोग गर्न सकिन्छ ।
म शम्भु दुबे अर्थात शम्भुुबाबुुका बारेमा भन्दै थिएँ । त्यो के भने, उनी कवि थिए । तर उनी जतिञ्जेल बाँचे, आफ्ना कविता प्रकाशित गरेनन् । उनी राम्रा कथाकार पनि थिए । संयोगले एक जना फिल्म निर्देशकले उनको कथाका बारेमा थाहा पायो । अहिले त शम्भुुबाबुुको मृत्यु भइसक्यो । उनको एउटा कथामा आधारित जुन महान् फिल्म बनेको छः त्यसको नाम हो, झाँसी की रानी । यो फिल्मले अनेक राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय पुरस्कार प्राप्त गरेको छ । तर अफसोस, उनी यो संसारमा छैनन् । उनी त्यहाँ मेरा एक मात्र मित्र थिए ।
एक पटक जब म त्यहीँ बस्छु भनेर निर्णय गर्छुु– त्यहीँ बस्छुु । म त्यहाँ सात वर्षसम्म बस्छुु भन्ने योजना बनाएको थिएँ तर एघार वर्षसम्म बसेँ । शायद मलाई त्यहाँ बस्न मनाउनका लागि कसैले सात वर्षसम्म भनेका थिए होलान् । अथवा, शुरुदेखि नै उनीहरूको त्यही आशय थियो होला ।
त्यो बेला भारतमा शिक्षाको ढाँचा प्राथमिक शिक्षाको चार वर्ष थियो। स्थानीय अधिकारीहरूले यसलाइ बेग्लै किसिमले व्यवस्थापन गरेका थिए । त्यसपछि अझ बढी पढ्न चाहेको खण्डमा तीन वर्ष थपिन्थ्यो । यसरी सात वर्ष पढेपछि सर्टिफिकेट पाइन्थ्यो ।
शायद उनीहरूको इच्छा पनि त्यही थियो होला, झुटो त बोलेका नहोलान् । तर एउटा अर्को तरिका पनि थियो र त्यही भयो । चार वर्षपछि तिमीले जुन पद्धतिमा शिक्षा लियौ, त्यसपछिको पढाइका लागि मिडिल स्कुलमा भर्ति हुनुपर्थ्यो । पहिलो पद्धतिमा अंग्रेजी सिक्न सकिन्नथ्यो । प्राथमिक शिक्षाको सात वर्षपछि सकिन्थ्यो र स्थानीय भाषामा थप कक्षा पढेर शिक्षित भइन्थ्यो । भारतमा तीस भाषाहरूले मान्यता पाएका छन् । तर चौथो वर्षपछि विद्यार्थीका लागि विकल्प थियो, अंग्रेजी स्कुलमा भर्ति हुनु र मिडिल स्कुलमा जान सकिन्थ्यो । यो पनि चार वर्षे पाठ्यक्रम थियो । र, सोही क्रममा पढ्दै गर्दा थप तीन वर्षपछि म्याट्रिकको परीक्षा पास गरिन्थ्यो ।
हे भगवान् ! जीवनका त्यति सुन्दर वर्षहरू त्यति निर्दयी र त्यति क्रुरताले नष्ट गरिन्छ ! म्याट्रिक परीक्षा पास गरेपछि विश्वविद्यालय पढ्न सकिन्छ । विश्वविद्यालयमा छ वर्षको पाठ्यक्रम हुन्थ्यो । यसरी मैले चार वर्ष प्राइमरी स्कुलमा, चार वर्ष मिडिल स्कुलमा, तीन वर्ष हाई स्कुल र छ वर्ष विश्वविद्यालयमा गरी मेरो जीवनका १७ वर्ष बर्बाद गर्नुप-यो । यो कस्तो व्यवस्था हो ? अबुुझ्झकी र मूूर्खताको कुनै सीमा छैन । सत्र वर्ष ! यो मूर्खता शुरु गर्दा म आठ कि नौ वर्षको थिएँ ।
विश्वविद्यालय छोड्दा म २६ वर्षको थिएँ । र, म निकै खुसी थिएँ । म गोल्ड मेडलिस्ट भएकामा खुसी थिइनँ, बरु अन्ततः म मुक्त भएकामा खुसी थिएँ । अब म पुनः स्वतन्त्र थिएँ । त्यहाँबाट टाप कस्न म उत्ताउलिइरहेको थिएँ । मेरा प्राध्यापकलाई मैले भनेँ, ‘तपाईं मेरो समय बर्बाद नगर्नुस् । यो ढोकाभित्र पुनः प्रवेश गर्न कसैले पनि मलाई मनाउन सक्तैन । म नौ वर्षको थिएँ, मेरा पिताले मलाई घिसार्दै भित्र लानुपरेको थियो र अब त मलाई कसैले पनि घिसार्न सक्तैन । कसैले कोसिस ग-यो भने पनि म उसैलाई घिसार्दै बाहिर ल्याउँछु। र, वास्तवमै मैले ती वृद्ध सज्जनलाई घिसारेँ नै ! उनी मलाई त्यहाँ रोक्ने पूरापूर प्रयास गरिरहेका थिए । उनी मलाई पिएचडीका लागि यस्तो छात्रवृत्ति पाउनु गाह्रो छ भनी सम्झाउँदै थिए । उनले पिएचडीपछि डि.लिट. पनि पाउनसक्छु भन्दै थिए ।
मैले भनेँ, ‘मेरो समय बर्बाद नगर्नुस् । मेरो गाडी छुट्न लाग्यो । बस त्यही ढोकाछेउ उभिइरहेको थियो । मैले दौडेर गाडी चढ्नुथियो । गाडी छुुट्न दिनु हुन्थेन । मलाई दुःख लागेको छ, मैले उहाँलाई धन्यवाद पनि भन्न सकिनँ । मसँग समय नै थिएन । बस हिँड्न लागेको थियो र मेरा सामान बसमाथि हालिसकिएको थियो । जसरी प्रायः सबै बसका ड्राइभर बजाउने गर्छन्, मेरो बसको ड्राइभर पनि बेस्कन हर्न बजाइरहेको थियो ।
म मात्रै एउटा यात्रुथिएँ, जो बस बाहिर थिएँ र मेरा वृद्ध प्रोफेसर म नजाऊँ भनी बिन्ती गरिरहेका थिए ।
जब शम्भुुबाबुसँग मेरो मित्रता शुरु भयो, उहाँ अत्यन्त शिक्षित र म ज्यादै अशिक्षित थिएँ । उहाँको विगत ज्यादै सुनौलो थियो र मेरो त कुनै विगत नै थिएन । सारा गाउँ हामी दुुईबीचको मित्रता देखेर छक्क पर्थ्यो तर शम्भुुबाबुुलाई कुनै संकोच लाग्दैनथ्यो । उहाँको त्यो विशेषतालाई म आदर व्यक्त गर्छु । हामी दुवै जना हात पक्डेर घुुम्न निस्कन्थ्यौँ । उहाँ मेरो बुवाकै उमेरका हुनुहुन्थ्यो र उहाँका सन्तान पनि मभन्दा ठूला थिए । मेरा पिताको मृत्युु हुनुुभन्दा १० वर्षअघि उहाँको निधन भयो । त्यो बेला उनको उमेर ५० वर्षको थियो होला । यो बेला बरु हाम्रो मित्रताको उपयुक्त हुन्थ्यो होला । त्यो बेला मलाई राम्रोसँग चिन्ने व्यक्ति शम्भुुबाबुु मात्र हुनुहुन्थ्यो । त्यो गाउँमा उहाँको दबदबा थियो र उहाँसँगको मेरो मित्रताले ठूलो काम ग-यो ।
कानो मास्टर त त्यसपछि स्कुलमा कहिल्यै देखिएन । सेवा निवृत्त हुनुुभन्दा पहिले नै उसलाई बिदा दिइयो । सेवा अवधि बढाउने उसको निवेदन अस्वीकृत गरियो । त्यसैले गाउँमा एक किसिमको उत्सव मनाइयो । कानो मास्टर त्यो गाउँमा निकै प्रभावशाली मानिन्थ्यो तर मैले एकै दिनमा उसको धागो काटिदिएँ । यो निकै ठूलो कुरा थियो । मानिसहरूले मलाई सम्मानको नजरले हेर्न थाले । मैले उनीहरूलाई भनेँ, मैले त केही गरिनँ, मात्र उसको गलत काम उजागर गरेको हुँ । म छक्क पर्छु, जीवनभर त्यो मानिसले ससाना बालबालिकालाई कसरी जीवनभर सताएको होला !
त्यो बेला कुटपिट नगरी, दुुईचार झापड नहानी बालबालिकालाई पढाउन सकिन्न भन्ने धारणा थियो । अहिले पनि धेरै भारतीय यस्तै सोच्छन्, उनीहरूले यो कुरा मानून् कि नमानूून् ।
मैले मानिसहरूलाई भनेँ, ‘मेराप्रति आदर गर्न पर्दैन । शम्भुुबाबुुसँग मेरो जुन मित्रता छ, त्यसमा उमेरको अन्तरले केही फरक पर्दैन । वास्तवमा उहाँ मेरा बुवाको साथी हुनुुहुन्छ ।’
मेरा पिता यो मित्रता देखेर छक्क पर्नुहुन्थ्यो । उहाँले शम्भुबाबुसँग सोध्नु पनि भयो, ‘यो बदमास केटोसँग तपाईंको यति दोस्ती किन नि ?’
शम्भुबाबुले हाँस्दै भन्नुभयो, ‘यसका बारेमा त अहिले म केही भन्न सक्तिनँ तर एक न एक दिन तपाईंले अवश्य बुझ्नु हुनेछ ।’
उहाँको सौन्दर्यमा म सधैँ आश्चर्य पर्थे । यो उहाँको सौन्दर्यको अंश नै थियो– भन्नुभयो, म अहिले केही भन्न सक्तिनँ तर एक दिन आफैँ बुझ्नु हुनेछ । एक दिन उहाँले मेरा पितालाई भन्नुभयो, ‘यो केटोसँग मेरो मित्रता होइन, बरु उसप्रतिको आदर हो ।’
उहाँका यी शब्द सुनेर म आफैँ पनि चकित परेँ । हामी एक्लै हुँदा मैले सोधेँ, ‘शम्भुबाबु, तपाईंले बुवालाई के भन्दै हुनुहुन्थ्यो ? तपाईंले मलाई सम्मान गर्नुपर्छ भनेको के हो ?’
उहाँले भन्नुभयो, ‘म तिमीलाई आदर गर्छु । एउटा धमिलो पर्दा पछाडिजस्तै एक दिन तिमी के बन्छौ भन्ने म प्रस्टै देखिरहेको छु ।
मैले अपत्यारिलो भावमा भनेँ, ‘म के बनौँला र ? म त अहिले पनि त्यही हुँ ।’
उहाँले भन्नुभयो, ‘यही तिम्रो कुराले मलाई छक्क पार्छ । तिमी बालक हौ । सारा गाउँ हाम्रो मित्रतामा हाँस्छ । उनीहरुले हाम्रो यो मित्रता बुझ्न सकेका छैनन् । हामी के कुरा गर्छौं होला भनेर ती छक्क पर्छन् । तर उनीहरु के गल्ती गरिरहेका छन् भनेर थाहा छैन ।’
‘मलाई थाहा छ,’ उहाँले जोड दिँदै भन्नुभयो, ‘मलाई थाहा छ, म केही केही महसुस गरिरहको छु, मैले के गल्ती गरिरहेको छु । तर म त्यसलाई प्रस्ट देख्न सकिरहेको छैन । धमिलोझैँ केही देखिरहेको छु । शाद एक दिन तिमी ठूलो मान्छे हुनेछौ, त्यो बेला राम्रोसँग देख्न सकूँला ।’
आज म यहाँ स्वीकार गर्छु, मग्गाबाबापछि शम्भुबाबु अर्का एक जना व्यक्ति थिए, जसले मेरो जीवनमा केही अवर्णनीय घटेको छ । उहाँ रहस्यदर्शी त हुनुहुन्थेन तर ज्यादै राम्रो कवि हुनुहुन्थ्यो । किनभने उहाँले आफ्ना कविता प्रकाशित गर्ने कहिले पनि प्रयास गर्नु भएन । उहाँले कुनै कवि सम्मेलनमा पनि भाग लिनु भएन । अनौठो कुरा त, मजस्तो ९ वर्षको बालकलाई ती कविता सुनाउनु हुन्थ्यो । मलाई सोध्नुहुन्थ्यो, कविता राम्रो छ कि छैन, राम्रो लाग्यो कि लागेन ? बल्ल यतिबेला उहाँका कविता प्रकाशित भएका छन् तर उहाँ यो संसारमा हुनुहुन्न । उहाँको सम्झनामा ती कविता प्रकाशित गरियो तर तिनमा उहाँका सुन्दरतम कवितालाई संकलित गरिएन । उहाँका कविताको छनोट त कुनै रहस्यदर्शीले मात्र गर्न सक्छ र ती कविता संकलन गर्ने व्यक्ति पनि कुनै कवि थिएन । उहाँले जे जति लेख्नु भएको थियो, ती सबै मैले देखेको छु । धेरै त होइन, केही लेख थिए, केही कविता थिए, केही कथा थिए तर अनौठो कुरा, ती सबैको एउटै विषय ‘जीवन’ थियो । दार्शनिक जीवन होइन, काल्पनिक जीवन होइन, जीवन जस्तो छ त्यस्तै, क्षण क्षणमा जे बाँचिन्छ, त्यही जीवन । अंग्रेजी शब्द ‘लाइफ’ (जीवन)लाई ठूलो एल होइन, सानो एल लेख्नुहुन्थ्यो किनभने उहाँ अंग्रेजीमा क्यापिटल अक्षरका विरुद्धमा हुनुहुन्थ्यो । अंग्रेजीको वाक्यको शुरुमा सानो अक्षर नै लेख्नुहुन्थ्यो । कतिसम्म भने आफ्नो नामको पहिलो अक्षर पनि सानो अक्षरमा लेख्नुहुन्थ्यो ।
एक दिन मैले सोधेँ, ‘ठूलो अक्षरमा किन लेख्नु हुन्न ? यसमा नराम्रो के छ र ? ठूलो अक्षरविरुद्ध नै लाग्नु भएको छ त ?’
उहाँले भन्नुभयो, ‘म यसका विरुद्ध छैन । मलाई सुदूर भविष्य होइन, वर्तमानसँग प्रेम छ । मलाई साना साना चिजहरूमा प्रेम छ । जस्तो चियाको प्याला, नदीमा पौडनु, आरामले पल्टेर घाम ताप्नु, यस्ता साना-साना कुरा मलाई ज्यादै प्रिय लाग्छन् । म ती कुरालाई ठूलो अक्षरमा लेखिँदैन । लेख्न सकिँदैन ।’
म उहाँलाई राम्रोसँग बुझ्छु । यद्यपि उहाँ सम्बुद्ध अथवा जाग्रत गुरु हुनुहुन्थेन । उहाँलाई कुनै पनि किसिमको गुरु भन्न नसकिएला र पनि म उहाँलाई मग्गाबाबापछिको दोस्रो महत्त्वपूर्ण व्यक्ति मान्छु । किनभने उहाँले नचिनिने बेलामा पनि मलाई चिन्नुभएको थियो । चिन्नु बिल्कुलै असम्भव थियो । त्यो बेला शायद मैले आफूलाई चिनेको थिइनँ । तर शम्भुबाबुले चिन्नुभएको थियो ।
पहिलो पटक उहाँको उपसभापतिको कार्यालयमा छिर्दा हामी दुवैको आँखा जुधे, एक क्षणका लागि त मौन अवस्था छायो । त्यसपछि उहाँ उभिनु भयो र उहाँले मलाई भन्नुभयो, ‘कृपया बस्नुहोस् ।’
मैले भने, ‘तर तपाईं किनु उभिनु भएको ? उभिनुपर्ने आवश्यकता छैन ।’
उहाँले भन्नुभयो, ‘आवश्यकताको प्रश्न होइन, तिमीलाई देखेर उभिन मन लाग्यो । मलाई खुसी लाग्यो ! यस्तो पहिले कहिल्यै भएको थिएन । म गभर्नरजस्ता अन्य शक्तिशाली मानिसहरूका सामु पनि उभिएको छु । नयाँ दिल्लीमा मैले भाइसरायलाई पनि देखेको छु तर तिनलाई देखेर कहिल्यै पनि विस्मय भएन तर अहिले तिमीलाई देखेर भएको छु । यो कुरा कसैलाई नभन्नू ।’
मैले चालीस वर्षसम्म यो कुरालाई गोप्य नै राखेँ । आज पहिलो पटक यो कुरा भनिरहेको छु । यसलाई यहाँ सुनाउँदा सन्तोष लागिरहेको छ ।
आज बिहान गुडियाले मलाई भनी, म निकै अबेरसम्म सुतेँ अरे । होला पनि, धेरै वर्षपछि हिजो राति म राम्रोसँग सुतेँ । म चाहन्छु, हरेक रात त्यसरी नै सुतूँ । मेरो सारा रात एक क्षणका लागि पनि निद्रा टुटेन । प्रायः एक पटक त उठेर आफ्नो घडी हेर्छु नै, उठ्ने समय भयो कि भएन भनेर । तर हिजो राति यतिका वर्षपछि एक पटक पनि घडी हेरिनँ । मैले देवराजको मिश्रण पनि लिन सकिनँ । उसले मेरो बिहानको खाजाका लागि तयार गर्थ्यो । यो एक प्रकारको गाढा छ तर निकै राम्रो छ । यसलाई खानु गाह्रो छ किनभने यसलाई चबाउन आधा घण्टा लाग्छ तर स्वास्थ्यका लागि निकै राम्रो छ, ज्यादै पौष्टिक छ । बिहान नास्ताका लागि देवराजले बनाएको यो मिश्रण सबैले खानु पर्छ । तर यसलाई बिस्तारै बिस्तारै खानुपर्छ । बिहानको खाजालाई अंग्रेजीमा ब्रेक फास्ट भन्छन् तर यसलाई त ब्रेक स्लो भन्नुपर्छ किनभने ज्यादै सुस्तरी खानुपर्छ । र, ब्रेक स्लो शब्द सुन्न मलाई त्यति मन पर्दैन ।
आज दुई कारणले ब्रेक फास्ट छोड्नु प-यो । एक त मैले देवगीतकहाँ समयमै पुग्नु थियो । तै पनि पाँच मिनेट त ढिला भएँ नै । ढिला पुग्नु मलाई मन पर्दैन । म त्यो मिश्रण खान थालेको भए त्यसमा यति समय लाग्थ्यो कि त्यसलाई खाइसक्दा लञ्च गर्ने समय भइसक्थ्यो । ब्रेक फास्ट र लञ्चका बीच कुनै समय नै बाँकी हुँदैनथ्यो, जबकि त्यो आवश्यक छ । त्यसैले सोचेँ, यसलाई छोडूँ क्यार । तर मलाई यो निकै मन पर्छ । नखाएकै कारण अहिले मलाई यसको सम्झना आइरहेको छ ।
गएको रात ज्यादै अनौठो थियो किनभने हिजो तिमीहरूले शम्भुबाबुको कुरा ग-यौ र मेरो मनबाट बोझ उत्रियो । मैले आफ्ना पिता र उहाँसँग हुने संघर्षको कुरा भनेँ र त्यो कसरी अन्त्य भयो भन्ने पनि सुनाएँ । यसपछि मेरो सारा बोझ उत्रियो ।
शम्भुबाबु सम्बुद्ध हुनसक्ने व्यक्ति थिए तर उहाँ चुक्नुभयो । आफ्नो अति बौद्धिकताका कारण उहाँ चुक्नुभयो । उहाँ महामनीषी हुनुहुन्थ्यो । उहाँ एक क्षणका लागि पनि चुप रहन सक्नु हुन्थेन । उहाँको मृत्युका बेला म सँगै थिएँ । यो विचित्र संयोग, मैले ती सबै मानिसको मृत्यु देख्नुप-यो, जसलाई म प्रेम गर्थें । मर्नुभन्दा पहिले उहाँले मलाई टेलिफोन गरेर चाँडै आऊ भनी बोलाउनुभयो । म शायद केही दिन बाँचूला भन्दै हुनुहुन्थ्यो । जबलपुर त्यो गाउँभन्दा ८० माइल टाढा थियो । म तुरुन्तै हिँडे र दुई घण्टामा त्यहाँ पुगेँ । उहाँ मलाई देखेर ज्यादै खुसी हुनुभयो । मलाई त्यही दृष्टिले हेर्नुभयो, जुन दृष्टिले पहिलो पटक म नौ वर्षको छँदा हेर्नुभएको थियो । त्यहाँ केही भनिएन, तर सबैकुरा सुनियो, त्यो बेलाको मौन, ज्यादै मुखर थियो ।
उहाँको हात पक्डिदै मैले भनेँ, ‘तपाईं आँखा बन्द गर्नुस्, खुला नराख्नुस् ।’
उहाँले भन्नुभयो, ‘आँखा त चाँडै नै आफैँ बन्द हुँदैछन् । त्यसपछि त म खोल्न पनि सक्तिनँ । मलाई आँखा बन्द गर्न नभन । म यो बेला तिमीलाई हेर्न चाहन्छु । यसपछि शायदै तिमीलाई दोहो-याएर हेर्न सकूँला । किनभने तिमी यसपछि जन्म लिने छैनौ । मैले तिम्रो कुरा मानेको भए, तिमीसँग मौन हुने कयौँ अवसर गुमाउनु पर्थेन । मैले सधैँ टारिरहेँ । अब त टार्ने समय पनि रहेन ।’
उहाँका आँखा आँसुले भरिए । म चुपचाप उहाँछेउ बसिरहेँ । उहाँले आँखा बन्द गर्नुभयो र प्राण निस्कियो । उहाँका आँखा ज्यादै सुन्दर थिए र अनुहार पनि प्रतिभापूर्ण थियो । म धेरै सुन्दर मानिसलाई देखेको छु तर उहाँजस्तो सुन्दर देखिनँ । उहाँको सौन्दर्य दिव्य थियो । उहाँ मेरा प्रिय हुनुहुन्थ्यो र अहिले पनि हुनुहुन्छ । अहिलेसम्म उहाँले शरीर नै धारण गर्नुभएको छैन र म उहाँलाई प्रतीक्षा गरिरहेको छु ।
यो कम्युनका केही उद्देश्य छन् । केही उद्देश्यहरू तिमीहरूलाई थाहै छ र केही मलाई मात्र थाहा छ । कम्युनका व्यवस्थापकहरूलाई मैले केही आत्मा पर्खिरहेको छु भन्ने थाहा छैन । म केही यस्ता दम्पति पनि तयार गरिरहेको छु, जो ती आत्मालाई ग्रहण गर्न सक्लान् । शम्भुबाबु चाँडै नै यहाँ आउनु हुनेछ । उहाँसँग सम्बन्धित यति स्मृति छन् कि मैले बारम्बार उहाँको बारेमा उल्लेख गर्नुपर्नेछ । तर आज म उहाँको मृत्युका बारेमा नै भन्न चाहन्छु ।
अनौठो कुरा, मैले उहाँको मृत्युको चर्चा गरिहेको छु र अन्य कुरा पछि गर्नेछु । मलाई चाहिँ यो अचम्म लाग्दैन किनभने मलाई थाहा छ, मृत्युको क्षणमा व्यक्ति पूर्ण रुपमा फक्रन्छ, प्रस्फुटित हुन्छ । प्रेममा पनि यस्तो चमत्कार हुँदैन । हुनसक्छ तर प्रेमीहरुले यसलाई रोक्छन्, बाधा पु-याउँछन् । प्रेममा दुई व्यक्तिको आवश्यकता हुन्छ । मृत्युमा त व्यक्ति एक्लै पर्याप्त हुन्छ । मृत्युमा अरु कसैले कुनै अड्चन, बाधा पु-याउन सक्तैन । मैले शम्भुबाबु यति आनन्द र यति शान्तिपूर्वक मरिरहेको देखेँ कि उहाँको अनुहारलाई कहिल्यै बिर्सन सक्तिनँ ।
तिमीहरूलाई आश्चर्य लाग्ला, उहाँको अनुहार अमेरिकाका भूतपूर्व राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सनसँग मिल्दोजुल्दो थियो । निक्सनको कुरुपता उहाँमा थिएन नत्र त शम्भुबाबु पनि भारतको राष्ट्रपति बन्नुहुन्थ्यो । यसमा कुनै सन्देह छैन, भारतका राष्ट्रपति सञ्जीव रेड्डीभन्दा धेरै प्रतिभाशाली हुनुहुन्थ्यो । भन्नुको मतलब, हेर्दा उहाँ निक्सनजस्तै हेर्दाका कम उमेरका देखिनुहुन्थ्यो । सत्य त के भने, जब आत्मा भित्र हुन्छ वाह्य रुपका बाबजुद अनुहारको आभामण्डल बेग्लै नै हुन्छ । त्यसैले मलाई गलत नबुझ्नू । तिमीहरू सबै रिचर्ड निक्सनलाई जान्दछौ र म मात्र शम्भुबाबुलाई चिन्दछु । त्यसैले यहाँ भ्रम उत्पन्न हुनसक्छ ।
मैले उस्तै देखिन्थे भनेको कुरा अब बिर्सिदेऊ । बिर्स । राम्रो छ, शम्भुबाबुको अनुहारतिर नजाओ, बरु रिचर्ड निस्कनझेझैँ सोच्न थाले । निक्सनका लागि मेरो हृदयमा थोरै ठाउँ छ किनभने उनी केही शम्भुबाबुजस्तै देखिन्छन् । यसका लागि मलाई माफ गर । मलाई थाहा छ, उनी यसका लागि योग्य छैनन् तर म विवश छु । जब म निक्सनको फोटो देख्छु, म शम्भुबाबु नै देख्छु, निक्सन देख्दिनँ ।
जब निस्कन अमेरिकाको राष्ट्रपति बने, मैले मनमनै सोचेँ, ‘वाह ! कम्तीमा शम्भुबाबुजस्तै देखिने मानिस अमेरिकाको राष्ट्रपति त बन्यो ! शम्भुबाबु अमेरिकाको राष्ट्रपति बन्नु मलाई राम्रो लाग्थ्यो तर अब यो सम्भव थिएन । अँ, यी दुई अनुहारबीचको साम्यताले मलाई सन्तोष भयो । जब निक्सनले त्यो काण्ड गरे, मलाई लाज लाग्यो किनभने ऊ शम्भुबाबुजस्तै देखिन्थ्यो । जब उसले राष्ट्रपति पदबाट राजिनामा दियो, म उदास भएँ । उसका कारण होइन । ऊसित त मेरो कुनै सम्बन्ध नै थिएन । अब म अखबारहरूमा शम्भुबाबुको अनुहार हेर्न पाउने छैन भनेर मात्र उदास भएँ ।
अब त त्यो पनि समस्या रहेन किनभने अखबार पढ्न छाडिसकेँ । कयौँ वर्षयता मैले पढेको छैन । एक समय थियो, म समाचारपत्रलाई एकै मिनेटमा पढिसिध्याउँथे । दुई वर्षयता मैले कुनै अखबार हेरेको छैन । अब त किताब पनि पढ्न छाडिसकेँ । म केही पढ्दिनँ । म अब पुनः अशिक्षित भएको छु । म जसरी सधैँ अशिक्षित हुने सपना देख्थेँ । मेरा बुवाले घिसार्दै नलग्नु होस् भन्ने चाहेको थिएँ… तर उहाँले घिसार्नु भयो । ती सबै स्कुल, कलेज र विश्वविद्यालयले मलाई जे सिकाए, त्यसलार्य बिर्सन, त्यसलार्य मेटाउन मेरो धेरै ऊर्जा निकै ठूलो शक्ति खर्च भयो । तर यस्तो गर्न म सफल भएँ । समाजले मलार्य जे पनि सिकाएको थियो, मैले त्यसलाई मेटाएँ । अब म दोहो-याएर अशिक्षित गवाँर केटो बनेको छु ।
अंग्रेजीमा यससका लागि कुनै शब्द छैन तर हिन्दीमा गाउँको मानिसलाई गँवार भन्छन् । गाउँ (देहात)लाई गाँव भन्छन् र देहातीलाई गँवार । तर गँवारको अर्थ मूर्ख पनि हुन्छ । र, यी दुई अर्थ यति घुलमिल भएका छन् कि कसैले पनि गँवारको अर्थ देहाती हुन्छ भन्दैनन् । हामी सबै गँवारको अर्थ गाउँको भन्दैनाँै, मूर्ख नै ठान्छौँ ।
म गाउँबाट जस्तो खाली कागज, कोरा कागजजस्तो आएको थिएँ, जसमा केही पनि लेखिएको थिएन, गाउँबाट टाढा हुँदा म जस्तो जंगलीजस्तै भइरहेँ । मैले कहिल्यै कसैलाई पनि ममाथि केही लेख्न दिइनँ । मानिसहरु त लेखिनका लागि सधैँ तयार हुन्छन् । तयार मात्र होइन, उनीहरु त आग्रह नै गर्छन्, केही न केही लेखियोस् भन्ने चाहन्छन् । म चाहिँ गाउँबाट बिल्कुलै खली आएको थिएँ । अब म भन्न सक्छु, यसबीचमा जे लेखिएको थियो त्यो सबै मैले मेटाएको छु । पूरै मेटाएको छु । सत्य त, मैले त्यो भित्तोलाई नै भत्काएको छु, जसमा दोहो-याएर केही लेख्न नसकियोस् ।
शम्भुबाबुले पनि त्यस्तो गर्न सक्नुहुन्थ्यो । मलाई थाहा छ, उहाँ बुद्ध हुन योग्य हुनुहुन्थ्यो तर हुनु भएन । शायद उहाँको पेशा, उहाँ वकिल हुनुहुन्थ्यो र त्यही पेशा बाधा बन्यो । मैले अनेक प्रकारका मानिसहरु बुद्ध भएको सुनेको छु तर आजसम्म कुनै पनि वकिल बुद्ध भएको सुनेको छैन । यो पेशाको मानिस त्यतिञ्जेलसम्म बुद्ध हुनसक्तैन, जबसम्म उसले आफूले पाएको समस्त शिक्षा परित्याग गर्दैन । शम्भुबाबुले त्यो साहस गर्न सक्नु भएन । उहाँप्रति मलाई यही अफसोस छ । अरुका प्रति मलाई कहिल्यै यति अफसोस भएन । किनभने मैले अर्को कोही फेला पारेको छैन कि त्यति योग्यता होस् र पनि उसले छलाङ मार्न नसकेको होस् ।
उहाँलाई पटक पटक सोध्थेँ, ‘शम्भुबाबु, किन यो असहज, अप्ठेरोपन किन ?’
उहाँले सधैँ एउटै उत्तर दिनुभयो, ‘के भनूँ ? कसरी भनूँ ? म आफैँलाई थाहा छैन । यो बाधा, यो अड्चन के हो बुझ्नै सकिरहेको छैन । केही न केहीले मलाई रोकिरहेको छ ।’
मलाई थाहा छ, त्यो अड्चन के थियो । उनलाई पनि यो थाहा थियो तर उहाँले कहिल्यै पनि थाहा भएको कुरा मान्नु भएन । म उहाँको अड्चनका बारेमा जान्दछु भन्ने चाहिँ उहाँलाई थाहा थियो । जसै म उहाँलाई यो प्रश्न सोध्थेँ, उहाँ सधैँ आँखा बन्द गर्नुहुन्थ्यो । तर म पनि कम जिद्दी चाहिँ थिइनँ । उहाँलाई पटक पटक सोध्थेँ, ‘भन्नुस्, त्यो बाधा के हो ?’ उहाँ आँखा बन्द गर्नुहुन्थ्यो र मेरो आँखासँग जुधाउन चाहनु हुन्न थियो । किनभने त्यो बेला उहाँले मसँग झुटो बोल्न सक्नुहुन्न् थियो । त्यो बेला उहाँले वकिलले बोल्ने झूटो बोल्न सक्नुहुन्न थियो ।
अब त उहाँ जीवित हुनुहुन्न । अब म उहाँका बारेमा भन्न सक्छु, उहाँ बुद्ध हुनुहुन्थेन र पनि उहाँ बुद्धत्वको निकट चाहिँ हुनुहुन्थ्यो । म अरु कसैका बारेमा यस्तो भन्न सक्तिनँ तर उहाँका बारेमा भन्छु । ‘बुद्धत्वको निकट’ हुनुको विशेष वर्ग मैले शम्भुबाबुका लागि मात्र राखेको छु ।